အစွန်းရောက် မူဆလင်ဆိုတာဘာလဲ ၊ မူဆလင် ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ | မျိုးမြန်မာ
အစွန်းရောက် မူဆလင်ဆိုတာဘာလဲ ၊ မူဆလင် ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ
Posted by myomyanmar on June 2, 2014
Posted in: ဘင်္ဂလီအရေး, အစ္စလမ်ဘာသာ.	Tagged: မွတ်စလင်, အစွန်းရောက်မွတ်စလင်.	Leaveacomment
အလ္လာဟ်ရှင်မြတ် တိတ်တဆိတ် (ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်) ပို့ချတော်မူခဲ့သော ကိုရန်ကျမ်းစာအရ ၊ မူဆလင် ၂ မျိုးမရှိပါ ။ မူဆလင် (အစ်စလမ်ကိုယုံကြည်သူ) ၁ မျိုးသာရှိပြိးအားလုံးသော မူဆလင်များမှာ တစ်သွေးတစ်သံ တစ်မိန့်တည်းသာဖြစ်ပါသည် ။
မွတ်ဆလင်များ အစွန်းရောက်ခြင်း ၊ အစွန်းမရောက်ခြင်းသည် မွတ်ဆလင်လူဦးရေအချိုးအစားနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည် ။ အစွန်းရောက်ခြင်း မရောက်ခြင်းဖြင့် မူဆလင်ကိုခွဲခြားမည်ဆိုပါက –
– အစွန်းရောက် မူဆလင်
– အစွန်း မရောက်တရောက် မူဆလင်
– အစွန်း ရောက်ခါနီးနေသော မူဆလင်
– အစွန်း ရောက်လုဆဲဆဲ မူဆလင်
– အစွန်းမရောက်သယောင်ဆောင် (ငုတ်) နေသောမူဆလင် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးခွဲခြားရပါလိမ့်မည် ။
မွတ်ဆလင်လူအင်အားမကောင်းသေးသော ၊ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% မစွန်းသေးသော နိုင်ငံ၊ မြို့၊ ပြည်နယ်၊ ဒေသများမှ မွတ်စလင်များမှာ ( မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% မစွန်းသေးသောကြောင့်) အချိန်မတန်သေးသောကြောင့် အစွန်းမရောက်သေးပါ။
နိုင်ငံ၊ မြို့ဒေသများတွင်း မွတ်ဆလင်လူအင်အားများလာသော၊ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% စွန်းသွားသော ကျော်သွားသော နိုင်ငံ၊ မြိ့၊ ပြည်နယ်၊ ဒေသများမှာ မူ အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်တန်ပြီဖြစ်သဖြင့် အစွန်းရောက်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ သာဓကအားဖြင့် ရှုစားတော်မူကြပါ-
ဘူးသီးတောင် မွတ်စလင် ၉၅%
သံတွဲ မွတ်စလင် ၆၀%
စစ်တွေ မွတ်စလင် ၅၀% ဖြစ်သွားသောကြောင့် အစွန်းရောက်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အကယ်စစ်စစ် အစွန်းရောက် မွတ်စလင်ဆိုသည်မှာ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀%စွန်းသွား သော ကြောင့် အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်တန်သွားသောကြောင့် အစွန်းရောက်မွတ်စလင်ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ကာ ငြိမ်းချမ်းသောမူဆလင် (အစွန်းမရောက်သေးမွတ်စလင်)ဆိုသည်မှာ မူ မွတ်ဆလင်လူဦးရေ အစွန်းမရောက်သေးသောကြောင့် ၊ မွတ်ဆလင်လူဦးရေ အလယ်အလတ်ပဲရှိသေးသောကြောင့် အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်မတန်သေးသောကြောင့်သာ အလယ်အလတ်မွတ်ဆလင်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ယခု ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမွတ်ဆလင်များကို ကြည့်ပါ။
ရန်ကုန်၊ မန်းလေး မှ မွတ်ဆလင်များသည် ထိုင်းတောင်ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မှ မွတ်ဆလင်များကဲ့သို့ အစွန်းရောက်မွတ်ဆလင်များ မဟုတ်ပဲ လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေသော ငြိမ်းချမ်းသောမွတ်ဆလင်များ ဖြစ်နေသည်ကို သင်တွေ့ နိုင်ပါသည်။
မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၅၀% မစွန်းသေးသောကြောင့် အချိန်မကျသေးသောကြောင့် အစွန်းမရောက်ကြသေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သရက်သီးနဲ့ ဥပမာ ပေးပါမည်။
သရက်သီး စိမ်းမျိုး၊ သရက်သီးမှည့် မျိုးဟူ၍ နှစ်မျိုးမရှိပါ။ သရက်သီးတစ်မျိုးသာရှိပါသည်။ အချိန်မတန်သေးသော၊ စောသေးသော သရက်သီးက စိမ်းကာ၊ အချိန်တန်သော ၊ အချိန်ကျပြီဖြစ်သော သရက်သီးက မှည့်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့ အတူ မွတ်ဆလင် က မွတ်ဆလင်ပဲ ။ အစွန်းရောက် မွတ်ဆလင်နဲ့ အစွန်းမရောက်သေးတဲ့ အလယ်အလတ် မွတ်ဆလင် ဆိုတာ အခြေအနေ ကာလံဒေသ၊မွတ်ဆလင်လူအင်အားကို ကြည့်ပြီး ပြောင်းလဲနေတာ..
အခြေအနေမပေးသေးလို့ ၊ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်နေရတဲ့ အစွန်းမရောက်မူဆလင်များကိုတော့ ကိုရမ်ကျမ်းစာအရ Taqiya (တာကိးယေ) (Concealing One’s Faith)လို့ ခေါ်ပါသတဲ့ ။ မူဆလင် ငုတ်ကောင်တွေပေါ့ခင်ဗျာ ။
ဒီတော့ မူဆလင်မှာ အကြမ်းဖက်မူဆလင်၊ အကြမ်း မဖက် မူဆလင် ဆိုပြီး မရှိပါ ။ အကြမ်းဖက်နည်း ( အယ်ကိုင်းဒါး၊ တာလီဘန်) ကို ကျင့်သုံးနေသော မူဆလင်များ နှင့် ၊ အကြမ်းမဖက် အစွန်းမရောက်နည်း ( မူဆလင် လူဖေါက်၊ ဗလီဆောက် နည်း ) ကို ကျင့်သုံးသော မူဆလင် များ ဟုသာရှိပါသည်။ ဘယ်နည်းပဲ ကျင့်သုံး၊ ကျင့်သုံး၊ ဦးတည်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်မှာ အတူတူ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မတူညီတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ကို ကျင့်သုံးနေတဲ့ (တူညီတဲ့ ဦးတည်ချက်ရှိတဲ့ ) မူဆလင်များသာဖြစ်ပါသည်။
မူဆလင်အားလုံးသောမူဆလင်တို့၏ တူညီသော မဟာတာဝန်မှာ ဂျီဟတ်(Jihad) ဖြစ်သည် ။ အစ္စလာမ်အယူဝါဒ ဦးတည်ချက်မှာ တစ်ခုသာရှိပါသည်= တစ်ကမ္ဘာလုံးက ရှိရှိသမျှ ဘာသာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပြီး၊ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ လူသားအားလုံးကို ( မျိုးတုံးပစ်) ချေမှုန်းပစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး ကို အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါသည်။ ဂျီဟတ်(Jihad)ကို အကြမ်းဖက်နည်းဟု အဓိပ္ပါယ်မဖွင့်ပါ ။ စစ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ စစ်မှာ ပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြစ်သည် ။
( မူဆလင်တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက် တစ်ခုကို ကြုံလို့ပြောပြရဦးမယ်။ မင်းတို့ သူများနိုင်ငံတွေ၊ သူများဘာသာတွေကို စော်ကားဖျက်ဆီး သိမ်းပိုက်နေတာ တရားသလားလို့မေးကြည့်တော့…
” တရားတယ်တဲ့၊ ဒီ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဥရောပ နိုင်ငံတွေက အလ္လာဟ် ဖန်ဆင်းထားလို့ မူဆလင်နိုင်ငံ( နယ်မြေတွေပဲတဲ့ ) အဲဒီ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဥရောပ မူဆလင်နယ်မြေတွေကို ( အရင်ရောက်တဲ့) ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ က သာ သိမ်းပိုက်ထားလို့ တဲ့ ။ သူတို့ရဲ့ မူဆလင်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဥရောပ နိုင်ငံတွေ ကို သာ ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ က သိမ်းပိုက်ယူထားတာတဲ့ ၊
တစ်ကမ္ဘာလုံးက မူဆလင်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ အတွက် ရန်သူဘာသာခြား ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ( အလ္လာဟ် ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ) အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ ၊ထိုင်း ၊ အမေရိက နိုင်ငံတွေကို မူဆလင်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်တာ တရားတယ်တဲ့ ”
ကဲ ၊ မှတ်ကရော့ ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ နဲ့ ယေရှုခရစ်က က အလ္လာဟ်ရဲ့ တပည့်တွေတဲ့ ..
မူဆလင်တွေကို အဲဒီလို ပြောခဲ့တဲ့သူ က ဘယ်သူလဲ…
အသက် ၅၄နှစ် အရွယ်သေခါနီး အချိန်မှာ သူ့မြေးလောက်ရှိတဲ့ ၉နှစ်ကလေးကို လိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ မိုဟာမက် ၊ ကပြောခဲ့တာ..
မိန်းမ အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ပြီး အလ္လာဟ် ဘုံမှာ အသက် ၁၂နှစ် အရွယ် လူပျိုပေါက် ၂၈ယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံမယ်ဆို တဲ့ မိုဟာမက် က ပြောခဲ့တာ..
မူဆလင်မဟုတ်သူတွေကို အောင်မြင်အောင် သတ်ရင် နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ မိုဟာမက် ကပြောခဲ့တာ..
ခရဲဒစ် တူ –